November 2, 2020 1604
छोराको कु टाईबाट घा’इते सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका–३ की ७५ वर्षीया सुदामादेवी साह सोनारको शनिबार दिउँसो नि’धन भएको छ। मंगलबार दिउँसो कान्छो छोरा रामऔतार साहको कारण घाँ’टीमा चो ट लागि सुदामा घा’इते भएकी थिइन्।
दुई छोरा र तीन छोरीकी आमा सुदामा दुवै छोरा छुट्टिएपछि एक्लै बस्दै आएकी थिइन्। जेठा छोरा रामबहादुर र कान्छा छोरा रामऔतार छुट्टिएर बस्दै आएका छन्। मंगलबार राम’औतारले बुहारी मनीषाको खुट्टा’को घा उ धामी (झारफुक) गरी निको पारिदिन आमा सुदामालाई भनेको थियो।
सुदामा गाउँमा धामीको काम पनि गर्दै आएकि थिइन्। तर सुदामाने छोराले भनेको मानिनन् । सो क्रममा वि’वाद भएपछि आमालाई कु टे का हुन् ।
खुट्टाले वृद्ध आमाको घाँ टी मा थि’चि’दि एपछि उनी अ चे’त भएको खबर सो वडाका वडाध्यक्ष कपलेश्वर यादवसम्म पुग्यो। यादवले प्र’हरीलाई खबर गरे। प्रहरीले वृद्ध महिलालाई तत्कालै उद्धार गरी उप’चारका लागि जनकपुर पुर्‍यायो।
घाइ’तेलाई जनकपुर पुर्‍याएपनि उप’चार नहुने भन्दै घर फिर्ता पठाइदिएको अध्यक्ष यादवले बताए। घरमै छोरीहरुले सेवा गरेर राखेपनि शनिबार स्वास्थ्य प्रतिकूल भएपछि जिल्ला अस्पताल सिरहा पुर्‍याइएको थियो।
जिल्ला प्रह’री कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता डिएसपी शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। उ’पचारकै क्र’ममा उनको दिउँसो निध’न भएको उनले बताए। उनका अनुसार आरोपी’त रामऔतार अहिले प्र’हरी हिरास’तमा छन्। नागरिक दैनिकमा मिथिलेश यादवले समाचार लेखेका छन् ।
यो अर्को सामग्री पढ्नुहोस्…. यस्ता ४ काम , जुन धेरै बेर गर्न हुदैन..
विष्णु पुरा’णमा भूगोल, कर्मका’ण्ड, ज्योतिष, राजवंश र भगवान श्रीकृष्णको चरित्रको बारेमा वर्णन गरिएको छ । जो मानिस सुखी जीवन बिताउन चाहान्छ, त्यसले विष्णु पुराण’का यी नियम जान्नै पर्ने हुन्छ ।
यहाँ चारवटा काम’हरु उल्लेख गरिएको छ, जुन धेरै समयसम्म गर्नै हुँदैन । निरो’गी तथा राम्रो बन्न हरेक दिन बिहान नुहाउ’नुपर्दछ । यदि नुहाएको बेला दिमागमा केहि कुरा आयो भने शुभ फल प्राप्त हुन्छ ।
नुहाउने सम’यमा गुरु मन्त्र, स्तोत्र तथा श्लोकहरु वा भगवानको नाम लियो भने पनि अक्षय पु’ण्यको लाभ हुन्छ । तर धेरैबेरसम्म नुहाउँदा भने स्वास्थ्यलाई हानी हुन्छ ।
-जीवनशैलीमा निन्द्रा’ राम्रो लिन आवश्यक छ । हरेक दिन ७ देखि ९ घण्टासम्म निदाउन आवश्यक हुन्छ । यदि रा’म्रो निन्द्रा पुगेन भने तपाई बिरामी हुनुहुनेछ ।
-शास्त्रका अनुसार बिहान छिटै उठ्ने र बेलुका चाँ’डै सुत्नुपर्दछ । तर शास्त्रले दिनमा सुत्नु’लाई नराम्रो मान्ने गरेको छ ।
– बिहानको समयमा श्रीमानश्रीमतीले शारीरि’क सम्पर्क गर्न नहुने पनि शास्त्रमा उल्लेख छ । किनभने बिहानको समयमा शारी:रिक सम्बन्ध राख्दा विभिन्न रोगले सताउँदछ ।
– सूर्योदय भन्दा पहिला उठ्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मात्र होइन यसले जीवनमा समृद्धि पनि लिएर आउँछ । बिहान धेरै समय सुत्दा तपाईलाई विभिन्न रो:गले सताउँछ । साथै लक्ष्मी पनि तपाई’सँग रु’ष्ट हुन्छिन् । एजेन्सीको सहयोगमा
Prevआफ्ना औंला हेरेर थाहा पाउनुहोस् तपाईको आफ्ना गोप्य कुराहरु….
Next१२ वर्षअघि आँफैले प्रेम गरी बिहे गरेको श्रीमानको कुट’पिटबाट निरुको मृत्यु, टुहुरा भए छोराछोरी
अञ्जली अधिकारीको रमाइलो तीज गीत (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
रक्सी’ले मताएर काठमाडौँमा युवतीलाई यस्तो गरेपछि….
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (50816)